35 Asɛm a efi Yehowa hɔ baa Yeremia nkyɛn wɔ Yuda hene Yehoiakim,+ Yosia ba no nna no mu ni: 2 “Kɔ Rekabfo+ no fie, na wo ne wɔn nkɔkasa na fa wɔn bra Yehowa fie adidibea no biako mu, na ma wɔn nsã nnom.” 3 Ɛnna mefaa Habasinia ba Yeremia ba Yaasania ne ne nuanom ne ne mmabarima nyinaa ne Rekabfo fie mma no nyinaa, 4 na mede wɔn baa Yehowa fie hɔ, nokware Nyankopɔn nipa Hanan, Yigdalia ba no mma adidibea+ a ɛwɔ mpanyimfo no adidibea a ɛwɔ ɔpon ano hwɛfo Salum+ ba Maaseia adidibea atifi nkyɛn hɔ no mu. 5 Ɛnna mede nkuruwa a nsã ayeyɛ no amaama ne nkora sisii Rekabfo fie mma no anim, na meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monnom nsã.” 6 Na wɔkae sɛ: “Yɛrennom nsã biara, efisɛ yɛn agya Rekab+ ba Yonadab hyɛɛ yɛn sɛ, ‘Monnnom nsã biara; mo ne mo mma nyinaa nnnom bi da.+ 7 Munnsisi afie, na munnnua aba biara; monnyɛ bobeturo biara, na mommfa nnyɛ mo de. Ntamadan mu na montena mo nna nyinaa na moatena ase akyɛ asase a moyɛ ahɔho wɔ so no so.’+ 8 Enti yɛatie yɛn agya Rekab ba Yehonadab, nea ɔhyɛɛ+ yɛn no nyinaa mu, na yɛnnom nsã biara yɛn nna nyinaa mu, yɛne yɛn yerenom ne yɛn mmabarima ne yɛn mmabea,+ 9 na yensisii afie bi ntenaa mu na yenni bobeturo anaa asase anaa aba bi. 10 Yɛtete ntamadan mu; yɛatie na yɛayɛ nea yɛn agya Yonadab+ hyɛɛ yɛn no nyinaa.+ 11 Nanso bere a Babilon hene Nebukadresar tu baa asase yi so+ no, yɛkae sɛ, ‘Mommra mma yɛnkɔ Yerusalem, Kaldea asraafodɔm ne Siria asraafodɔm no nti, na yɛnkɔtena Yerusalem.’”+ 12 Na Yehowa asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ: 13 “Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni, ‘Kɔ na kobisa Yuda mmarima ne Yerusalemfo sɛ: “Mantu mo fo daa sɛ muntie m’asɛm?”+ Yehowa asɛm ni. 14 “Rekab+ ba Yehonadab asɛm a ɔka kyerɛɛ ne mma sɛ wɔnnnom nsã biara no, wɔadi so na wɔnnom nsã de besi nnɛ, na wɔadi wɔn agya ahyɛde so.+ Me de, mekasa kyerɛɛ mo, mesɔree anɔpahema kasa kyerɛɛ mo,+ nanso moantie me.+ 15 Mesomaa me nkoa adiyifo+ no nyinaa baa mo nkyɛn daa; mesɔree anɔpahema somaa wɔn sɛ, ‘Obiara nsan mfi ne kwammɔne so+ na momma mo nneyɛe nyɛ yiye,+ na munnkodi anyame foforo akyi nnsom wɔn.+ Na montena asase a mede maa mo agyanom no so daa.’+ Nanso moammrɛ mo aso ase, na moantie me.+ 16 Rekab+ ba Yehonadab mma no adi wɔn agya ahyɛde a ɔhyɛɛ wɔn no so,+ nanso ɔman yi de, wɔantie me.”’”+ 17 “Enti nea Yehowa, asafo Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn no aka ni, ‘Hwɛ, mmusu a maka atia Yuda ne Yerusalemfo nyinaa no, mede ne nyinaa bɛba wɔn so,+ efisɛ mekasa kyerɛɛ wɔn, na wɔantie; mefrɛɛ wɔn daa, nanso wɔannye me so.’”+ 18 Na Yeremia ka kyerɛɛ Rekabfo fie mma no sɛ: “Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni, ‘Sɛ́ moatie mo agya Yehonadab+ ahyɛde na moda so di n’ahyɛde nyinaa so na moyɛ nea ɔhyɛɛ mo nyinaa+ nti, 19 nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: “Onipa a obegyina+ m’anim remmɔ Rekab ba Yonadab da biara da.”’”+